Chrome 92 inouya nemakumi matatu neshanu ekuchengetedza zvigadziriso uye nekukurumidza zviito | Linux Vakapindwa muropa
Pasi pemwedzi miviri yapfuura, Google yakakanda iyo 91st vhezheni yewebhusaiti yako ine mashoma akakosha nhau kumushandisi wepakati. Maawa mashoma apfuura, nezuro munguva yako yenguva, ivo vaparura Chrome 92, uye ichi chichava chimwe chikamu chisingazopinde munhoroondo yekusanganisa maficha kana shanduko yekushongedza inokwezva kutarisisa kwakawanda. Iko kunofanirwa kukwidziridzwa, zvirinani nekuda kwechimwe chikonzero, sekukanganisa kwakawanda kwekuchengetedza kwakagadziriswa.
Pakazara, vakagadziriswa 35 zvikanganiso zvekuchengetedza. Pakati pezvinhu zvitsva zvinonyanya kutifadza sevashandisi, isu tine zviito zvitsva zvinokurumidza uye kugadzirisa mukuparadzaniswa kwemapeji ewebhu, kunyangwe iyo yekupedzisira inogona zvakare kuverengerwa muboka renhau rekuchengetedza, kana kunyanya zvakavanzika. Heino runyorwa rweakakwirisa auya pamwe neChris 92.
Chrome 92 inosimbisa
Zviito zvitsva zvinokurumidza senge Manage Kuenderana, Manage Security Zvirongwa, kana Security Tarisa.
Kugadziridzwa mukuparadzaniswa kwemapeji ewebhu.
Mvumo mubhawa rekero.
Izvo zvakagadziriswa kuti iyo yakasarudzika ruvara nzvimbo ye2D canvases uye ImageData ndeye sRGB uye parameter inowedzerwa kutsanangura iyo isiri-RGB nzvimbo yemavara painogadzira 2D canvas kana ImageData.
Pakutanga rutsigiro rwe Shared Element Shanduko se API nyowani kubvumidza yakapusa seti yeshanduko mune imwechete-peji uye akawanda-peji mashandisiro, zvichiita kuti ikurumidze / nyore kuendesa shanduko dzakadai.
Nhanganyaya ye crypto.randomUUID kugadzira RFC-4122 v4 inoenderana neUUIDs nenzira yakatarwa yekuvandudza kuchengetedzeka.
Chrome's saiti yekuzviparadzanisa ficha yakawedzeredzwa kuti ibatanidzewo ekuwedzera mabrowser
Kumwe kuchengetedzwa kwekuvandudza.
Chrome 92 inowanikwa kubva nezuro, saka vashandisi veWindows uye macOS vanogona kugadzirisa kubva kune imwechete browser. Vashandisi veDebian-based masisitimu uye vamwe vakaita saFedora, uko iyo repository inowedzerwa otomatiki kana uchiisa iyo kekutanga, inofanirwa zvakare kuve neiyo yekumirira yakamirira mune software nzvimbo kana nemirairo sudo apt kugadzirisa && sudo apt kusimudzira. Pane Arch Linux yakavakirwa masisitimu yatove muAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Chrome 92 inosvika ine makumi matatu neshanu ekugadzirisa uye zviito zvinokurumidza